गिद्ध कोष के हो: यो किन भनिन्छ र यो कसरी काम गर्दछ | अर्थतन्त्र वित्त
गिद्धको पृष्ठभूमि के हो?
क्लौडी क्यासलहरू | 27/09/2021 15:45 | कोष
आज त्यहाँ धेरै कोष छन् कि यो धेरै भ्रामक हुन सक्छ। फिक्स्ड आय कोष, इक्विटी कोष, पैसा कोष, मिश्रित कोष, धन कोष पनि कोष! तर त्यहाँ एक छ कि धेरै उत्सुक हुन सक्छ यसको नाम को कारण: गिद्ध कोष। गिद्धको पृष्ठभूमि के हो? यस्ले कसरी काम गर्छ?
यदि तपाइँ यी प्रश्नहरुको उत्तर जान्न चाहानुहुन्छ, म सिफारिश गर्दछु कि तपाइँ पढ्न जारी राख्नुहोस्। हामी एक गिद्ध कोष के हो, यो कसरी काम गर्दछ र कुन स्पेन मा छन् भनेर बताउनेछौं। यसबाहेक, हामी 2008 को संकट को समयमा उसको मोडस संचालन मा टिप्पणी गर्नेछौं, ताकि तपाइँ आफ्नो काम गर्ने तरिका को एक राम्रो विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
1 यसलाई गिद्ध कोष किन भनिन्छ?
2 गिद्ध कोष कसरी काम गर्दछ?
2.1 स्पेन र गिद्ध कोष
यसलाई गिद्ध कोष किन भनिन्छ?
यी कोष को नाम बुझ्न को लागी, हामी पहिले एक गिद्ध कोष के हो भनेर व्याख्या गर्नेछौं। यी नि: शुल्क लगानी वा उद्यम पूँजी को आर्थिक संगठनहरु हुन् कि ती धेरै compromण प्रतिभूति प्राप्त गर्ने कम्पनीहरु को एक धेरै समझौता भएको सॉल्भेन्सी हो, तर ती राज्यहरु जो दिवालियापन को कगार मा छन्। त्यो भन्नु पर्ने हो: मूलतः उनीहरु उच्च जोखिम को पूंजी वा लगानी कोष हुन् जसको उद्देश्य debtण प्रतिभूतिहरु किन्ने हो, चाहे सार्वजनिक होस् वा निजी, कम्पनीहरु वा देशहरु जुन धेरै गम्भीर समस्याहरुमा छन्। तिनीहरू सामान्यतया २०% र ३०% को बीचमा उनीहरुको नाममात्र मूल्य तल छन्।
यसको मूल नाम अंग्रेजी हो, "गिद्ध कोष", जसको शाब्दिक अर्थ "गिद्ध कोष" हो। गिद्धहरु र्‍याप्टर हुन् कि मुख्य रूप मा carrion मा खुवाउँछन्। के तपाइँ समानता देख्नुहुन्छ? दुबै गिद्ध कोष र यी जनावरहरु अवशेष को लाभ लिन्छन्, त्यसैले उनीहरु यो नाम छ। यसबाहेक, यी कोषहरु लाई 'होल्डआउट्स' को रूप मा पनि जानिन्छ। जे होस्, यो शब्द वास्तव मा bondholders लाई सन्दर्भ गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। उनीहरु एक लगानी रणनीति को भाग को रूप मा प्राप्त गरीएको हुन सक्छ र सामान्यतया debtण पुनर्गठन मा भाग लिन सहमत छैनन्। बरु उनीहरु अदालत मार्फत एक मुद्दा चलाउन रुचाउँछन्।
यो गिद्ध कोष ध्यान दिन बाँकी छ उनीहरु लाई बजार मा प्रवेश गर्ने इरादा को धेरै व्यापक ज्ञान हुन्छ। यसको अतिरिक्त, उनीहरु सामान्यतया ठूला र पेशेवर टीमहरु, दुबै वकीलहरु र व्यवसाय पुनर्गठन प्रक्रियाहरु मा विशेषज्ञहरु बाट बनेका छन्।
गिद्ध कोष कसरी काम गर्दछ?
अब हामी जान्दछौं कि गिद्ध कोष के हो, तर उनीहरु कसरी काम गर्छन्? उनीहरु ती acquiredण लिएर के गर्छन्? एक पटक तपाइँ शीर्षकहरु कि हामी माथि उल्लेख गरीएको छ किन्नुभएको छ, गिद्ध कोष आफ्नो bestण को पूरा मूल्य स collect्कलन गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो गर्छन्। यस बाहेक, उनीहरु सबै बर्षहरु को लागी ब्याज जोड्छन् कि उनीहरुलाई बकाया छ। जब उनीहरु यस प्रकारको अपरेसन बाहिर निकाल्छन्, उनीहरु खाता टेकडाउन वा पुनर्गठन मा लिदैनन्।
गिद्ध कोष विशेषज्ञहरु जसको उद्देश्य एक धेरै नराम्रो आर्थिक स्थिति मा छन् कि बजार खोज्न को लागी छ। यी पेशेवरहरु लाई अनुभव को एक धेरै छ र बिल्कुल थाहा छ कसरी कम्पनीहरु को पुनर्गठन प्रक्रियाहरु लाई काम गर्दछ। एकपटक उनीहरु सबै भन्दा कम सम्भावित मूल्य मा सम्पत्तिहरु किन्न को लागी प्रबन्ध गर्दछन्, उनीहरु उनीहरुलाई प्राप्त गर्न को लागी तिर्नु भन्दा धेरै उच्च मूल्य मा छोटो वा मध्यम अवधि मा बेच्न को लागी प्रयास गर्छन्। जस्तै आशा गर्न सकिन्छ, उनीहरुले प्राप्त गर्ने लाभहरु धेरै ठूला छन्।
त्यहाँ केहि देशहरु छन् कि अपरेशन को धेरै प्रकार को आलोचना गर्न को लागी आएका छन्। गिद्ध कोष को रूप मा देशहरु वा कम्पनीहरु को एक धेरै कठिन स्थिति मा companiesण को खर्च मा नाफा उत्पन्न, दिवालियापन को कगार मा, र त्यसपछि एक धेरै उच्च मूल्य को लागी उच्च बोलीदाता लाई बेच्नुहोस्, उनीहरु यसलाई अनैतिक मान्छन्।
स्पेन र गिद्ध कोष
2008 मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकट भयो। यो तब थियो कि गिद्ध कोष स्पेन मा धेरै महत्त्वपूर्ण भयो। तब सम्म, उनीहरूले ठूलो मात्रामा विभिन्न धितो loansण किने। उनीहरुको कार्यशैली बैंक बाट buyingण किन्ने र पछि acquiredणीलाई दबाब दिईएको थियो कि उनीहरुले प्राप्त गरेको पूर्ण recoverण फिर्ता गर्न मा आधारित थियो। नतिजाको रूपमा, debणी, जो पहिले नै बैंक संग एक debtण र शायद एक खराब आर्थिक स्थिति थियो, यो assumeण ग्रहण गर्न सकेन। त्यस समयमा, गिद्ध कोष को निन्दा र यस प्रकार फौजदारी प्रक्रिया शुरू गर्न को लागी अगाडि बढे।
यो विशेष गरी स्पेन मा जहाँ गिद्ध कोष मुख्य रूप मा धितो, कम्पनीहरु र बैंक buyingण किन्न मा केन्द्रित छन्। स्पेनी क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो ज्ञात बीच Cerberus, लोन स्टार र ब्ल्याकस्टोन छन्। तर यी कोषहरु कति पैसा संभाल्न सक्छन्? ठिक छ, उनीहरु परिचालन गर्ने पैसा को मात्रा सजिलै संग अरबौं यूरो पुग्न सक्छ।
यदि हामी गिद्ध कोष को दावी संग सामना गरीरहेका छौं, पहिलो कुरा हामीले यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि यो साँचो लेनदार हो। यदि हो भने, हामी उहाँ संग कुराकानी गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्छौं। सामान्यतया, यो सजीलै बैंकहरु संग कुराकानी भन्दा।
मलाई आशा छ कि मैले गिद्ध कोष र यसको पद्धति को बारे मा तपाइँको सबै शंकाहरु लाई स्पष्ट पारेको छु। उनीहरु संस्थाहरु हुन् कि धेरै हेरचाह संग व्यवहार गरिनु पर्छ र सधैं राम्रो प्रिन्ट पढ्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » कोष » गिद्धको पृष्ठभूमि के हो?
सेठ Klarman उद्धरण
धितो के हो